Kacha mma Hydraulic winch Manufacturer na Factory | Okwu
Hydraulic winch jikọtara ya na gearbox ụwa, winch, moto hydraulic na ngọngọ valve enyemaka. Ọ na-egosipụta nkwekọrịta kọmpat, ịdị arọ ọkụ, nrụgide ọrụ dị elu, nkwụsi ike dị mma. Mmepụta torque: 7.5-620KNm Vehicle winch usoro na-ike anyị na-adịgide adịgide patent teknụzụ, nke na-eme ka ngwaahịa ọganihu na ya elu mma. Productdị ngwaahịa a ka etinyegoro ebe niile na ụgbọ mmiri na-ebugharị, gafee ụgbọ ala, ụgbọ agha ndị agha, bulldozer. Enwere ike iji ya napụta variou ...
Hydraulic winch jikọtara ya na gearbox ụwa, winch, moto hydraulic na ngọngọ valve enyemaka. Ọ na-egosipụta nkwekọrịta kọmpat, ịdị arọ ọkụ, nrụgide ọrụ dị elu, nkwụsi ike dị mma.
Vehicle winch series jikọtara anyị teknụzụ patent anyị dịgidere, nke na-enyere ọganihu ngwaahịa na ogo ya kacha mma. Productdị ngwaahịa a ka etinyegoro ebe niile na ụgbọ mmiri na-ebugharị, gafee ụgbọ ala, ụgbọ agha ndị agha, bulldozer. Enwere ike iji ya napụta ụgbọ ala dị iche iche mebiri emebi ma ọ bụ mikpuo n'apịtị, jirikwa ya dọpụta ihe dị arọ yana ọrụ nchekwa onwe.
haịdrọlik ụgbọala winch usoro bụ anyị patented ngwaahịa. Igwe a na-ejikọ ụgbọ ala nwere ọtụtụ ndị na-ekesa ya na vales mgbagharị na-achịkwa breeki na otu ma ọ bụ valvụ na-arụ ọrụ, hydraulic motor, Z type brake, C type gearbox gear, drum, frame and so on. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ịnye mkpọ ike hydraulic na valvụ ntụziaka. N'ihi na winch arụnyere na dị iche iche valvụ ngọngọ, ọ bụghị nanị na-achọ a dị mfe haịdrọlik na-akwado usoro, kamakwa nwere oké mma na ntụkwasị obi. Tụkwasị na nke ahụ, winch na-egosipụta arụmọrụ dị elu na mmalite na ịrụ ọrụ, obere mkpọtụ na ike oriri, ma nwee ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ na uru akụ na ụba dị mma.
Na Nyocha 12000 Series hydraulic winch nọọrọ onwe ya na valve na-achịkwa valve iji nyekwuo nnwere onwe na ngwa ma nwee ike ịdakwasị ya n'ihu ma ọ bụ n'azụ nke ụgbọala ahụ dị ka usoro mgbake na-adịgide adịgide ma ọ bụ nke nwere ike iwepụ. Iji usoro nlekọta ụgbọ nke ụgbọala dị ka isi iyi ya na-enye H12000 ohere ịga n'ihu n'emeghị batrị ahụ.
Ihe ngosiputa ihe omuma, mmebi na mmiri na-eguzogide mmiri, ihe 12000 nwere uzo abuo abuo, ihe nkpuchi ihe nkpuchi, aru aru, ihe nkpuchi igwe anaghị agba nchara na ihe nkedo, ihe ngbanwe nke uzo 3, 100 'nke eriri igwe, 12,000 pound nke ịdọpụta ikike ma choro ngwongwo ihe eji eme ihe 34 nke nkpuchi uzo maka ntinye na oru.
Nke gara aga: Hydraulic njem njem
Osote: HB usoro ihe eji eme ulo oru modular gear gear reducer
Discountable price China NEMA Standard Nepm Ser ...
USB reel reducer gearbox maka ndị nchịkọta
Special Ahịa maka China Y, Y2 Series Low Voltag ...
Guzosie ike na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Best Price maka China Arọ Ibu Ibu hipgbọ mmiri Hydraulic ...
Ọnụ ala dị ọnụ ala China Custom Custom Fine Final Turning ...